Fandrosoana mialoha ny fisorohana ny valanaretina Jwell mandritra izany fotoana izany dia tsy ampy ny mpitrandraka Meltblown tsy voatenona - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Ny fandrosoana amin'ny fisorohana ny valanaretina Jwell mandritra izany fotoana izany dia tsy ampy ny mpitrandraka Meltblown tsy voatenona
Fotoana: 2020-02-21 Hits:
24 ora an-tserasera tohana ara-teknika
Nilaza Andriamatoa Wang fa mba hanamaivanana ny tsy fahampian'ny fitaovana fisorohana valanaretina haingana araka izay tratra dia maro ny mpanjifa ny Jwell Machinery amin'ny sehatry ny rubber sy plastika no nandao ny fialantsasatry ny CNY ary niasa nandritra ny fotoana ela mba hahatonga ny fitaovana fisorohana ny valanaretina hatrany amin'ny laharana voalohany haingana kokoa ny fisorohana ny valanaretina.
Jwell Machinary, amin'ny maha mpamatsy fitaovana azy, dia miara-miasa amin'ny famokarana sy famatsiana fitaovam-piadiana fanoherana ny valanaretina. "Tamin'ny volana Janoary 2020, rehefa fantatray fa maro ny mpanjifa miasa ora maro amin'ny karazana fitaovana fananganana plastika vaovao (coil tsy tantera-drano, fantson-tsolika injeniera, fitaovana fananganana fiarovana ny tontolo iainana voaangona) ho an'ny fananganana hopitaly Leishenshan sy Huoshenshan, dia nanapa-kevitra avy hatrany izahay Avelao ny CNY. Mandritra ny fialantsasatra dia mihetsika haingana, manetsika miaramila miaramila sangany, injenieran'ny fikolokoloana fitaovana, ary manome fifandraisana eo an-toerana amin'ireo mpanjifa amin'ny alàlan'ny torolàlana amin'ny terminal lavitra mba hanomezana vokatra azo antoka ho an'ny mpampiasa ny orinasa ary manome teknika 24-ora serivisy fanampiana. "Andriamatoa. Hoy i Wang.
Jwell Masinera vahaolana ankapobeny ny Smart Factory
Miverina miasa mialoha Famatsiana extruder vita amin'ny lamba / sarimihetsika tsy voatenona
Miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny valan'aretina, nanjary maika ny famatsiana fitaovana manohitra ny valan'aretina toy ny sarontava, akanjo miaro ary lamba tsy tenona ho an'ny famokarana sarontava. Mba hiantohana ny fahaizan'ny famokarana akora misaron-tava sy fitaovam-piarovana akanjo, dia nandamina haingana ireo mpiasa eo ambany fanaraha-mason'ny antoko rehetra i Jwell, ary amin'ny fanaovana ny fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina manokana, dia nahazo fahazoan-dàlana hanohy ny asa amin'ny 4 febroary. ...
Jwell Masinina dia manome mavitrika ireo milina fantsom-panafody matihanina sy fanohanana ho an'ny indostrian'ny fiarovana: extruder PP tsy voatenona / PP meltblown extruder tsy voatenona / TPU / EVA / TPE.
Nilaza tamin'ny mpanao gazety Andriamatoa Wang fa amin'izao fotoana izao, ny filan'ny tsena amin'ny fitaovam-pidiovana sy fanadinana dia tena mafana tokoa, ary vokatra vitsivitsy malaza no tsy ampy. Taorian'ny nanohizan'ny orinasa ny asany dia betsaka kokoa ny baiko ary malaza eo amin'ny tsena izy io.
PP Non-tenona / PP Meltblown milina tsy mpanenona lamba extrusion
Jwell dia manana traikefa lehibe amin'ny indostrian'ny fitaovana fitsaboana. Anisan'ireny ny polypropylene meltblown nonwovens, izay akora ilaina amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso ny valanaretina, mampiasa akora polypropylene manokana ary manampy additives kilasy fitsaboana, fitaovana ara-pahasalamana vita amin'ny akora manokana novokarin'i Jwell mifanindran-dàlana amin'ny fitrandrahana visy kambana mampiasa teknolojia dingana tsy manam-paharoa. Ity fitaovana manokana ity dia manana ny mampiavaka ny fahamendrehana miorina, ny fizarana lanjan'ny molekiola tery ary ny fahombiazan'ny fihodinana. Izy io dia ampiasaina hamokarana fitaovana tsy voatenona voarendrika ary azo ampiasaina betsaka amin'ny fiarovana ara-pitsaboana, fitaovana fanadiovana, akora sivana ary saha hafa.
Ity vahaolana ity dia manome vahaolana feno ho an'ireo mpanamboatra matihanina maro any Shina sy any ivelany. Jwell dia mandrindra ny faritry ny famatsiana ary eo am-piomanana hanome tsipika famokarana bebe kokoa ho an'ireo orinasa mifandraika amin'ny ankohonana mba handray anjara bebe kokoa amin'ny fisorohana ny valanaretina.
TPU / EVA / TPE film extrusion tsipika
Ny sarimihetsika TPU dia miorina amin'ny pellets TPU ary nanjary sarimihetsika tamin'ny alàlan'ny fizotran'ny filatsahana. Jwell dia manintona ny traikefa famokarana mpamokatra TPU polyurethane maro. Amin'ny alàlan'ny fanatsarana sy fanavaozana, dia mampiasa extruders tokana na maromaro ho an'ny coextrusion. Ny extruder tsirairay dia mizara zona fifehezana mari-pana 8 ho an'ny fanaraha-maso maripana marina sy ny fivoahana avo indrindra Mety hahatratra 600KG / H, ary azo ampiasaina amin'ny fomba fizarana iray, A / B / A na A / B. Ny sarimihetsika TPU dia manana toetra mampiavaka azy toy ny fiarovana ny tontolo iainana, tsy misy poizina, fanoherana ny holatra, fanoherana ny bakteria, fanoherana tsy fahampiana sy fanoherana ny harafesina ary bio-mifanaraka. Ampiasaina betsaka amin'ny akanjo fitokana-monina ara-pahasalamana, satroka miaro ary vokatra mitokana hafa momba ny fahasalamana sy ny fisorohana ny valanaretina ary kiraro, akanjo, kilalao tsy azo afindra, fitaovana fanatanjahan-tena, fitaovam-pitsaboana, fitaovam-panatanjahan-tena, sns.
Miorina amin'ny fepetra takian'ny nomerika nomerika sy ny fitantanana manan-tsaina, ity andiam-modely ity dia manome fiasa toy ny fanaraha-maso mandeha ho azy, fahazoana angon-drakitra, fitehirizana angona, famakafakana angona, fitantanana ny famokarana, fanaraha-maso lavitra miaraka, sns. tsipika na fitantanana fanodinana extruder ary Digitalization ary sary an-tsaina ny fizotrany. Tena mandany vola.
Nilaza AndriamatoaWang fa amin'izao fotoana izao dia tonga ny ankamaroan'ny mpiasa ao amin'ny fivorian'ny atrikasa sy ny milina. Noho ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ataon'ny orinasa eo an-toerana, na dia nanakana ny famerenana ny famokarana betsaka aza ny valanaretina, dia mbola afaka manome antoka ny famokarana sy ny fiasan'ny orinasa izy io. Fitaovana voalohany amin'ny taona Mice dia naterina ary nalefa tany Alemana androany.
"Io karazana finoana io dia nanjary ny marimaritra iraisan'ny Jwellist." Raha mbola miady mafy isika ary mijery ny fiarovana sy ny fahombiazana, ny filaminana eo an-tanana dia ho azo tokoa rehefa tsindriana. "Ny orinasa Jwell dia mandrindra ny faritry ny famatsiana ary miomana hanome tsipika famokarana bebe kokoa ho an'ireo orinasam-pifandraisana anatiny sy avy any ivelany mba handray anjara amin'ny fisorohana ny valanaretina sy ny fisorohana ny valanaretina.
HIVERINAMba hanohanana ny "Anti-epidemiem" eran-tany, dia natombok'i CHINA JWELL mafy ny tsipika famokarana lamba vita amin'ny lamba tsy tenona an'ny PP Melt-blown
NEXTSHANGHAITEX 2019 MANarahaba An'i JWELL